Raha ny momba ny SEO inona no tanjon'ny orinasa nomerika?
Amin'ny 2017, ny SEO dia tokony ho laharam-pahamehana amin'ny tetik'asa ara-barotra mahomby. Raha tsy misy tetik'ady SEO mitantana tsara, dia tsy dia misy vintana firy ny ekipan'ny varotra anao hamokatra ny vokatra ilain'ny orinasa.
Raha toa ianao ka iray amin'ireo tompon'ity tranonkala ity izay mbola misalasala amin'ny fahombiazan'ny SEO, dia manohy mamaky bebe kokoa ianao. Ity lahatsoratra ity dia fikasana hafa handresy lahatra ireo mpandraharaha handinika ny SEO amin'ny fampiroboroboana ny raharahany.
Nahoana ny SEO no mila ny ho loha laharana amin'ny tetik'ady ara-barotra amin'ny Internet?
Better Chance afaka miseho amin'ny Top Search Results
Raha te hanintona mpanjifa maro kokoa, dia mila mahazo antoka ianao fa ny orinasanao nomerika dia mora mora hita an-tserasera. Izany no miditra ao amin'ny SEO - gestion des salaires excel. Ny fikajiana finday dia iray amin'ireo singa manan-danja indrindra izay mamela ny tranokalanao na ny bilaogy ho hita haingana amin'ny aterineto. Toy izao manaraka izao izy io: raha toa ka tsy mampiditra fanavaozana ho an'ny mpanjifantenan'ny mpanjifa ny paikady momba ny varotra, dia mety ho ny orinasanao nomerika dia tsy miseho ao amin'ny voka-pikarohana tsara hitany. Vokatr'izany dia tsy dia lavitra loatra ny fifamoivoizana eo amin'ny tranonkalanao izay mitondra fiovam-po.
Araka ny antontan'isa, ny fikarohana organika dia manana fiverenana tsara kokoa amin'ny fampiasam-bola (na ROI) noho ny fikarohana karama. Noho izany, raha mandatsaka ny ankamaroan'ny volanao amin'ny fikarohana karama ianao, dia azonao atao ny mieritreritra an'izany.
SEO dia mety amin'ny roa tonta: B2B sy B2C Companies
Voamarina imbetsaka fa SEO dia safidy tonga lafatra ho an'ny orinasa B2B sy B2C. Tsarovy, na inona na inona karazana mpanjifa, izy rehetra dia samy manao fikarohana amin'ny aterineto alohan'ny hanaovana ny safidy farany amin'ny fividianana. Araka ny fikarohana natao tamin'ny 2014 avy amin'ny Acquity Group, ny isan'ny mpividy B2B, izay 94%, dia manao fikarohana an-tserasera mialoha ny fividianana. Tsara ihany koa ny manamarika fa saika 80% amin'ireo mpividy ireo no mampiasa ny fikarohana Google mba hahitana ny vaovao ilaina ao amin'ny tranonkala.
Androany, ny antony lehibe mahatonga ireo orinasa B2B tsy hampiditra ny tetikady SEO dia noho ny tsy fisian'ny manam-pahaizana SEO ao amin'ny ekipa nomerika nomerika. Na izany aza, androany dia zava-dehibe ho an'ny orinasa B2B ny hampiasa vola amin'ny mpikambana ao amin'ny ekipa SEO. Izany no hany fomba ahafahan'izy ireo mamolavola paikady mahomby izay hitondra fiara sy hampitombo ny isan'ireo fiovam-po.
Ny tetikady tsara indrindra amin'ny fampidirana SEO
Androany, zava-dehibe ny mitazona ny fironana SEO. Amin'ny fametrahana tetikady SEO mahomby ho an'ny orinasanao nomerika ianao, dia manampy ny fahamarinanao sy ny fahefanao amin'ny marikao. Ankoatra izany, ny tetikady SEO iray efa vita tsara dia ahafahanao maka ny tranonkalan'ny orinasa nomerika ao amin'ireo pejy voalohany fikarohana.
Rehefa mampiditra SEO, manomboa amin'ny fametrahana mpikambana mahafeno ny ekipanao marketing.
Mitadiava fotoana ary tadiavo ny manam-pahaizana SEO matihanina sy manam-pahaizana matihanina amin'ny orinasan-tserasera. Tsarovy, indraindray, tsara kokoa ny manakarama matihanina noho ny fanaovana ny zava-drehetra. Tsy ho ela na ho haingana dia hihena ny ezaka ataonao.